Fikasana hetsika hanenjehana ireo bilaogera Maleziana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Mey 2019 4:02 GMT
(Marihina fa tamin'ny volana Aogositra 2008 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nitatitra ny vaovao an-tserasera fa hentitra ny governemanta amin'ny fanoherana ireo fiampangana an-tserasera atao amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny fanenjehana ireo lazaina fa nanao heloka bevava any amin'ny fitsarana noho ny fanalam-baraka sy ny fikomiana. Fantatra fa noraisina nandritra ny fivoriana, izay nahitàna ireo minisitry ny Kabinetra maro sy ireo tompon'andraikitra ambony tao amin'ny governemanta, anisan'izany ny Praiminisitra Lefitra Datuk Seri Najib Razak ity fanapahan-kevitra ity .
Fantatry ny governemanta ankehitriny fa ny vaovao an-tserasera no loharanom-baovao mahaliana kokoa noho fampitam-baovao mahazatra ho an'ny Maleziana. Voalaza fa mahatsapa ny vokatry ny fiampangana amin'ny aterineto tsy voafehy ny governemanta, indrindra taorian'ny tsy fahombiazany tamin'ny fahazoana ny roa ampahatelon'ny maro an'isa tao amin'ny Parlemantera nandritra ny fifidianana tamin'ny 8 Martsa 2008, sy ny fandresena lehibe azon'ny mpanohitra malaza, Anwar Ibrahim, nandritra ny fifidianana tamin'ny ampahany tao Permatang Pauh ihany koa.
Tsy afa-manoatra ny governemanta miaraka amin'ny fisian'ny vaovao an-tserasera taorian'ny taona maro nifehezana ny vaovao tamin'ny alàlan'ny lalàna mifehy ny fampahalalam-baovao mahazatra. Tsy mankatoa ny sivana amin'ny aterineto ny Lalana mifehy ny Serasera sy ny Haino Aman-jery ao Malezia (1998) , ka tsy manan-tsafidy afa-tsy fomba telo ara-dalana ihany ny governemanta dia ny eo amin'ny sehatra nasionaly, ny fikomiana ary ny andininy voalazan'ny Lalàna momba ny Fiarovana Anatiny tamin'ny taona 1960 (izay ahafahana mihazona olona tsy misy fitsarana); ary amin'ny sehatra tsy miankina, ny lalàna fitoriana ny fanalam-baraka (jereo ihany koa ny Jeff Ooi sy ny fanalam-baraka).
Io taona 2008 io no nahitana ny governemanta nitory ilay bilaogera Raja Petra Kamaruddin (na RPK) noho ny fikomiana, raha nohadihadiana noho ny fikomiana ihany koa ilay bilaogera Sheih. Nentina mba ho alaina ambavany ilay bilaogera Bakaq talohan'izay noho ny lazaina fa fikomiana ihany koa. Ankoatra izany, miatrika fiampangana fanalam-baraka i RPK. Noho izany, hita mazava ny toeran'ny governemanta miady amin'ny bilaogera. Nitaky kokoa amin'ny fandraisana andraikitra sy ny fangaraharana ireo mpitsikera fa tsy ny fifantohana amin'ny vaovao hafa. Niantso ihany koa izy ireo ny hanafoanana ireo fifehezana ny fampahalalam-baovao mahazatra.
Amin'ny olana izay inoana fa mifandraika amin'izany, nitatitra ireo bilaogera fa mety ny manampahefana no nanakatona ny vavahadim-baovaon'i RPK, Malaysia Today . Toa tsy azo nidirana tamin'ny alàlan'ny fifandraisana TM rehetra ity vavahadim-baovao ity. Ny Telekom Malaysia no mitantana ny TM, ilay mpamatsy tolotra aterineto lehibe indrindra any Malezia. Nanamarina tao amin'ny tatitra nataony ny tranokalam-baovao amin'ny aterineto Malaysiakini fa voasakana noho ny baikon'ny Vaomieran'ny Fifandraisandavitra ao Malezia sy ny Haino Aman-jery (MCMC) ny Malaysia Today.
Azo hidirana amin'ny alalan'ny tranonkala dindo ato ny Malaysia Today .